योगले फेरिएका अनुहारहरू | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार योगले फेरिएका अनुहारहरू
२०७६, ३ भाद्र मंगलवार ११:२७
यतिबेला मलाई एउटा सुन्दर कथाको याद आइरहेको छ– एउटा कुमालेले माटोका विभिन्न प्रकारका भाँडाहरु बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको थियो । यसै क्रममा एक दिन उसले एउटा मसाल (तम्बाकु खाने भाँडा) बनाउने निधो ग¥यो । उसले बनाउँदै गयो, आधा भाग सकिनै लाग्दा कुमालेले त्यस मसाललाई रद्द गरी कच्याककुचुक पारेर अर्को भाँडो सुराही बनाउन थाल्यो । दिनभरिको अथक प्रयास पछि एउटा सुन्दर सुराही तयार पा¥यो । र त्यस सुराहीलाई छेउमा राखी कुमालेले आफ्नो गोजीबाट चुरोटको बट्टाबाट एक खिली चुरोट निकालेर भर्खर तान्न थालेको थियो ।
यत्तिकैमा त्यस सुराही बोल्न थाल्यो र भन्यो – हे कुमाले पहिले तिमीले मलाई मसाल बनाउने अठोट गरेका थियौं । मसाल बनाउँदा बनाउँदै फेरि एकाएक मलाई तोडमोड गरी मलाई सुराही बनायौ यसको मतलब के हो ? भनी सवाल गरेछ । यस सवालको सटिक जवाफ दिँदै कुमालेले भन्यो – मैैंले अरु केही पनि गरेको होइन केवल मैंले आफ्नो विचार मात्रै बदलेको हो ?
सुराहीले भन्यो, ए ! त्यसो पो । हे कुमाले तिमीले केवल विचार मात्रै बदलेका रहेछौ । यहाँ मेरो सारा जिन्दगी बदलियो । कुमालेले सोध्यो – किन नि ? किनकी यदि तिमीले पहिले बनाए जस्तै मसाल बनाइ दिएको भए । म आफू पनि जल्ने थिएँ र अरुलाई पनि जलाउने थिएँ । तर मेरो सौभाग्यवश तिमीले आफ्नो विचार बदलि मलाई सुराही बनाइ दियौ । अब म आफू पनि शितल रहनेछु र अरुलाई पनि शितलता बाँड्नेछु ।
यस कथाबाट के सन्देश पाउन सकिन्छ भने जो मान्छे जुन कुराले भरिएको हुनेछ, त्यही चीज नै उसले अरुलाई दिने गर्दछ । फूलसँग सुगन्ध हुन्छ र दुनियाँलाई सुगन्ध बाँड्छ । फोहोरमैलासँग दुर्गन्ध हुन्छ र अरुलाई पनि दुर्गन्ध नै दिन्छ । जोसँग जे छ त्यही कुरा अरुलाई दिने कुरा रहेछ भन्ने सन्देश यसबाट पाउन सकिन्छ । यहाँ यस्तै पात्रहरु देखिएका छन् । हिजोका दिनहरुमा रोग शोकले भरिरहेका थिए र त्यतिबेला अरुलाई के दिएका थिए त्यो हामीलाई थाहा छैन । तर आज यी पात्रहरु निरोगले भरिएका छन् । सुखका सुगन्धले भरिएका छन् । आफूभित्र सुगन्धलाई यो दुनियाँलाई बाँड्ने अठोट गरेका हुन् । यसैले त आज म्याग्दीको पवित्र भूमिमा योग प्रशिक्षक भएर उभिएका छन् । यी उदाहरणीय पात्रहरु यस प्रकार छन् ः–
कोही रोग लागेपछि योग सम्झेर आउने गर्छन् । कोही समस्याहरु बोकेर योगमा आउने निर्णय गर्छन् । कोही साक्षीहरुको लहैलहैमा योगमा आउने गर्छन् । तर कुनै कुनै व्यक्तिहरु भने साँच्चिकै योगको महत्व बुझेर नै योगमा आएका हुन्छन् । तीमध्येका एक व्यक्ति हुन् शारदा मल्ल । वि.सं. २०६८ सालतिर आफ्नै पसलमा ग्राहकको रुपमा आएकी एक माताजीको प्रेरणाबाट योगमा प्रवेश गरेकी मल्लले योगमा आउनु अघिका दिनहरुमा आस्था च्यानलमा स्वामी रामदेव बाबाको योगका केही टिप्सहरुको साधना गरेता पनि योग केन्द्रमा गरिने साधना जस्तो सुव्यवस्थित रुपमा गर्न भने पाएकी थिइनन् तर योग केन्द्रमा भर्ना हुने दिनदेखि नै निरन्तर साधनामा जोडिएकी मल्ललाई योग प्रशिक्षकको प्रशिक्षण कोर्ष तालिम नलिएकै अवस्थामा पनि योग प्रशिक्षक भएर योग प्रशिक्षण दिनुपर्ने चुनौतिहरु आएका थिए ।
ती चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै अगाडि बढेकी मल्लले वि.सं. २०७० सालमा योग प्रशिक्षक कोर्ष लिई निरन्तर प्रशिक्षणमा तल्लीन भएर आफ्नो कला प्रतिभा मार्फत् बेनीमा योग वृक्षलाई जगेर्ना गर्ने महान कार्यको पहिलो श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । नवीन आनन्दयोग केन्द्र नेपाल वि.सं. २०७२ सालमा स्थापना भएपश्चात्का दिनहरुमा पनि मल्लले आफ्नो कुशल प्रशिक्षणको माध्यमबाट धेरै योगी साधनहरुको मन जित्न सफल भएकीछिन् । त्यतिमात्रै भनेर पुग्दैन ।
मल्लले २०७२ सालदेखि आजका दिनसम्म अनवरत रुपमा यस संस्थालाई निःशुल्क सेवा दिई संस्थाको प्रतिष्ठा उँचो राखि संस्थालाई समेत मन जित्न सफल हुनु भएको छ । आज उहाँको निजी व्यवसायको प्रगतिबाट जति उचाई लिनुभएको छ, त्यो भन्दा माथिको उचाई हासिल गरिसक्नुभएको छ । आज आफूलाई अमीरको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएकी मल्लसँग भविष्यमा योगी फकीर बन्ने सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । वि.सं. २०७२ सालमा संस्थापक सदस्यमा रहेकी मल्ल वि.सं. २०७५ सालको अधिवेशनबाट नवीन आनन्द योग केन्द्र नेपालको केन्द्रीय सहसचिव जस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएको छ । शारदा मल्ललाई कसनै पनि बहानामा काँडेवारले छेक्ने रोक्न सकेन । आखिर जीवन जिउनुको मजा पनि यसैमा छ ।
कुनै समय जिर्ण पिनास रोका कारण वर्षौंवर्षसम्म आँसु वर्षाएकी सिता घलेज्यूको जिन्दगी करिबकरिब नर्क बनेको थियो । एक पटकमा बीस पच्चिस पटकसम्म लगातार हाछ्युँ आउँथ्यो । जब सिंगान बग्न थाल्यो भने सिंगान पुछ्न सानो रुमालले कुनै अर्थ राख्दैनथ्यो । सिंगान पुछ्न ठूलो तौलिया नै साथमा राख्नुपर्दथ्यो । बेनीका डाक्टरको सिफारिसमा अस्पतालको औषधी सेवन गर्न थालेका घलेजीले पोखरा, काठमाडौंसम्म पुगी औषधी उपचार गराएकी थिइन् । यसरी गरिएको उपचारको बाबजुद पनि आफ्नो पिनासको रोग बीसको उन्नाइस हुन सकेको थिएन ।
झन् उल्टो लामो समयको औषधी सेवनबाट भएको औषधीको नकारात्मक असरले गर्दा दिनप्रतिदिन अन्य रोगहरु देखा पर्न थालेको थियो । जस्तै असाध्यै टाउको दुख्ने, ग्याष्ट्रिकको समस्या, ढाड दुख्ने समस्या, महिनावारीको समस्या लगायत कहिलेकाहीं एउटा खुट्टा लामो अर्को खुट्टा छोटो भएजस्तो अनु्भव हुने गर्दथ्यो । यी समस्याहरुको हरण गर्नका लागि मानिसको पाँच छपटक पोखराको अस्पतालको शरणमा पुग्नुपर्दथ्यो । यसरी इलाज गर्न जाँदा एक पटकमा बीस पच्चिस हजार खर्च हुने गर्दथ्यो ।
केही वर्षसम्म जीवनसँग आशावादी बनी पैसाले नै आयु किनिरहेका घलेले केही वर्षको अन्तरालमा आफ्नो स्वास्थ्य र आयु मात्रै गुमाएनन् नौ दश लाख पैसा समेत गुमाइसकेकी थिइन् । यी पैसाका नोटहरुसँग आफ्नो जीवन जिउने आशाहरु समेत गुमाएका घलेले वि.सं. २०६९ सालमा एकाएक आफ्नो जिन्दगीको पाइला मोडेर योग साधना केन्द्र पुगेकी थिइन् ।
जब घले योगमा जोडिइन् तब दिनप्रतिदिन घलेको स्वास्थ्य स्थितिमा अपत्यारिलो किसिमबाट सुधार तथा परिवर्तनहरु आउन थाल्यो । रोगका कारण जाडो महिनामा हात धुँदा चिसो लाग्ने भएकोले चम्चाले भात खानुपर्ने । आफूले खाएको भाँडा समेत अरुले माझिदिनुपर्ने घलेको यस्तो नाजुक स्थितिबाट मुक्त हुँदै गइन् ।
यति मात्रै हैनन् दिनप्रतिदिनको योग साधनाका कारण शरीरमा प्रतिरक्षात्मक प्रणाली, पाचनप्रणाली, विभिन्न अंग प्रणाली बलियो हुँदै गयो । मनोबल एवम्ु आत्मबल शक्तिशाली हुँदै गयो । परिणाम स्वरुप घलेको जिन्दगीलाई नर्कतुल्य बनाएको रोग कहाँ गयो, कहाँ बिलायो स्वयम् घलेलाई पनि पत्तो भएन । यसरी अनगिन्ती रोगहरुसँग हारेर लत्रिएको थलिएको रोगी जिन्दगीले एकाएक योगी बनेर समाजमा उत्रिएकी छिन् र घले योगबाट नयाँ जिन्दगी पाएसँगै अपार चिज पाएकी छिन् ।
जीवनरस पाएकी छिन् । आफूलाई बदलेकी छिन् । भद्र, शालीन, नम्र, अनुशासित, लगनशील एवम् इमान्दार स्वभावकी धनी घलेले आफूलाई मात्रै बदलेननु । समाज बदल्नको लागि योग प्रशिक्षक बनेर समाजमा उदाएकी छिन् । नवीन आनन्द योग केन्द्र नेपाल स्थापना हुनु अघिदेखि नै बेनी बजारमा योगरुपी वृक्षलाई मलजल गर्दै आएकी घलेले संस्था स्थापना भएपश्चात् पनि आफ्नो कुशल प्रशिक्षणको माध्यमबाट थुप्रै योगदान दिँदै आएकी छिन् । घलेजीको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी वि.सं. २०७६ सालको विश्व योग दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री नरदेवी पुनज्यूको बाहुलीबाट संस्थाले सम्मानपत्र सहित उच्च सम्मान गरेको थियो । अहिले नवीन आनन्द योग केन्द्र नेपाल शाखा सिंगा तातोपानीका योग केन्द्रका प्रशिक्षक समेत हुनुहुन्छ ।
आफ्नो जीवनमा आइपर्ने हर चुनौतिहरुमा एक कदम पछाडि फर्किन नजानेकी हिम्मतवाली कमलकुमारी पुन वास्तवमा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा पनि त्यतिकै इमान्दार र निष्ठावान छिन् । शारीरिक रोग तथा मासिक तनावका कारण दिनप्रतिदिन आफ्नो जिन्दगी असन्तुलनमा गइरहेको थियो । यी समस्याहरुको निदान र समाधान गर्ने सिलसिलामा निकै धेरै हस्पिटलहरुमा पुगी अनेकौं डाक्टरहरुका औषधी सेवन गर्दा पनि बीसको उन्नाइस नहुने भएपछि एलोप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकल्प के छ ? भनी खोज्ने क्रममा योग केन्द्रमा पुगेकी पुनले वि.सं. २०७२ सालदेखि आजका दिनसम्म निरन्तर योग साधना जोडिरहेकी छिन् ।
जसको परिणाम स्वरुप आफूसँग भएका कैयौं रोगहरु जस्तैः ग्याष्ट्रिक रोग, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, कम्मर दुख्ने, घँुडा दुख्ने, वजनको समस्या, कब्जियत, नशाका समस्या लगायतका असंख्य रोगहरु योगबाटै निको पारेकी पुनले आफू जस्ता थुप्रै रोगीहरुलाई सेवा गर्ने लक्ष्य लिई योग प्रशिक्षक समेत बनिसक्नुभएको छ । वास्तवमा योग साधनामा जोडिए पश्चात् आफूभित्र थुप्रै किसिमका परिवर्तनहरु पाएको र यसका साथै नयाँ जिन्दगी पाएको हुनाले संस्थाको हरेक किसिमका चुनौतिहरुमा पुनले आफ्नो घरको चुनौतिलाई भन्दा संस्थाको चुनौतिलाई महत्वपूर्ण ठानी मन, वचन र कर्मले भरपुर पसिना दान दिई यस संस्थालाई अतुलनीय योगदान दिएर संस्थाको शान उँचो पारेकी छिन् ।
आफ्नो जवानीमा खेलकुद भनेपछि हुरुक्क हुने पुनले खेलकुदमा उत्कृष्ट खेल प्रतिभा प्रदर्शन गरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको रुपमा आफूलाई जुन हिसाबले चिनाएकी छिन् । त्यो भन्दा बढी कुशल एवम् दक्ष योग प्रशिक्षकको रुपमा आफूलाई चिनाउन सफल भएकी छिन्। वि.सं. २०७२ साल भन्दा अघि अनेकौं रोगका रोगी कमलकुमारी पुन अहिले योगका संस्था हाँक्ने केन्द्रीय सदस्य एवम् योगी समेत भै सकेकी छिन् ।
दुनियाँले आफ्नो जिन्दगी हजारौं पुस्तकहरुमा खोज्यो । तर पुनले सदैव जिन्दगीलाई आफ्ना चुनौतिहरुमा खोजिन् । योग साधनाको गहिराईमा खोजिन् र ती गहिराईमा जे मोती भेटेकी छिन्, जो रस भेटेकी छिन्, सायद यो भन्दा अघिका जिन्दगीमा कहिल्यै भेटेकी थिइनन् । यसै कारण आज कमलकुमारी पुनले योग साधनालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग बनाई सकेकी छिन् ।
आहार, विहार र विचार हाम्रो यो जीवन शैलीलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरी के खाने के नखाने के गर्ने के नगर्ने देखि लिएर शारिरीक व्यायम, प्रणायम र ध्यान जस्ता मानव शरिरलाई तुरुन्त प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण कुराहरु सिकाईन्छ । सबै भन्दा त बसेर काम गर्ने मानिसहरुलाई सुगर, प्रेसरको बढी सम्भावना हुँदो रहेछ । योगमा जोडिनु भन्दा पहिले म पनि त्यसै भित्रको सुगर, प्रेसर र ग्याष्ट्रिकको विरामी हुँ । यदी त्यतिबेला म योगमा नजोडिएकोे भए आज औषधीको डोज बढाउँदै बस्दै गर्नु पर्ने अवस्था आउाथ्यो होला । योगमा लागे पछि मेरो सुगर प्रेशर विस्तारे कम हुँदै गयो अहिले एकदम कन्ट्रोलमा छ । पहिले ग्याँष्ट्रिकले मुखबाट अमिलो पानी आउने केही खादा पनि घाँटी र छाती पोल्ने गथ्र्यो अहिले त्यस्तोकेही पनि हुँदैन ग्याँष्ट्रिक निर्मुलै भएको छ ।
यती मात्र होईन योगले औषधीले पनि निमो गर्न नसक्ने रोगहरुलाई जस्तैः मानसिक तनाव, डिप्रेशन जस्ता रोगहरुलाई पनि निको गरेको थुप्रै उदारणहरु रहेका छन् । हामी केबल औषधीको भरमा मात्र नवसौ औषधीले मात्र हामीलाई केही गर्न सक्दैन ओषधीको साथमा योग साधना, खानपान र जिवनशैलीलाई परिवर्तन गरी मिलाएर जान सक्यौ भने मात्र हामी अकालमा मृत्यु हुन पर्दैन । जति पनि रोग मानिसलाई लाग्छ त्यो खाना नजानेर नै लाग्ने गर्छ । त्यसैले योगको नियमले के भन्छ भने ।खाना खान जान्यौ भने औषधीको रुपमा काम गर्छ । यदि जानेनौ भने यही खानाले विषको काम गर्दछ ।अहिलेको परिपेच्छेमा योग अति नै आवश्यक रहेको छ । हाम्रो दिन २४ घण्टाको समयलाई मिलाएर डेड घण्टा आफ्नो स्वास्थको लागि छुट्याउनुहोस सधै खुशी, सुखी, निरोगी र तनावमुक्त जीवन विताउनहोस् ।
जिर्ण माइग्रेन र महिनावारीको समस्याबाट पीडित गीता पुनले आफ्ना रोगहरु निको पार्नका निम्ति लामो समयसम्म नेपालका विभिन्न अस्पतालहरुमा गई विभिन्न किसिमका औषधी उपचार गरिरहे । शुरुका दिनहरुमा औषधी सेवन गरुन्जेल निको भए जस्तो हुने तर औषधी खान छोडेपछि समस्या यथास्थितिमा रहने गर्दथ्यो । जतिजति रोग पुरानो हुँदै जान्छ । त्यति डाक्टरले कडा औषधीहरु लेखिदिन्थ्यो र जति कडा भए पनि खानुपर्ने बाध्यता थियो । यही बाध्यतामा खाएको औषधीको नकारात्मक असरले गर्दा पुनको शरीरमा झन् झन् एकपछि अर्को रोग थपिँदै गयो ।
थुपै पैसाको खोलो लाग्यो । रोग जिउँका त्युँ रहिरह्यो । यो स्थितिमा उनी अत्तालिँदै विकल्प र उपायहरु खोज्न थालिन् । अन्तमा आफ्ना दाजु र श्रीमानको प्रेरणाबाट योग केन्द्रमा आइपुग्नुभएकी पुनले निरन्तर दुई वर्षसम्म योगसाधनामा जोडिन पुगिन् जसको परिणाम स्वरुप लामो समयसम्म आफूलाई दुःख दिएको माइग्रेन रोग सँधैंको लागि बिदा भयो । यति मात्रै होइन, एक वर्षसम्म रोकिएको मासिक धर्म पनि खुल्यो । यसका साथ साथमा कसरी खाने ? कसरी पिउने, कसरी जिउने, कसरी सोच्ने, कसरी बोल्ने लगायतका ज्ञानहरु पनि खुल्यो ।
जसले गर्दा आज पुनको जिन्दगीमा सुख, शान्ति र स्वस्थताको वसन्त आएको देखिन्छ । थोरै बोल्ने, जायज बोल्ने अन्तरमुखी स्वभावकी पुनः बहुप्रतिभाका धनी पनि छिन् । यसको साथै नवीन आनन्द योग केन्द्र नेपाललाई धेरै सहयोग हत्केलाहरु फुकाएका पुन वास्तवमा मनका धनी पनि छिन् । दोस्रो अधिवेशन देखि नविन आनन्द योग केन्द्र नेपालकी केन्द्रीय सदस्य तथा शाखा केन्द्र बगरफाँट पर्वतका योग प्रशिक्षक समेत छिन् ।
अंग्रेजीमा रोगलाई Disease भनिन्छ । यसको अर्थ Disको अर्थ अ र ease को अर्थ सजिलो । पूरा अर्थ हन्छ असजिलो । मनुष्य प्रकृतिको देन हो । यसकारण मनुष्य प्रकृतिको नियमसँग लयबद्ध हुन सकेन भने स्वस्थ भएर जिउने शारीरिक स्थिति असन्तुलन हुँदै जान्छ । शरीरमा यही अवस्था आइप¥यो भने असजिलो हुँदै जान्छ । मनुष्यमा दुःख, कष्ट आउन सुरु गर्दछ । यसै अवस्थालाई रोग भनिएको हो । यस्तै रोगहरुबाट पीडित एक नारी हुन् अनिता थापा । लामो समयसम्म ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, कब्जियत हुने, ग्याष्ट्रिक रोग हुने, पैताला पोल्ने, आँखा पोल्ने र नसाको रोग आदि इत्यादि रोगहरुले गर्दा डाक्टरको विभिन्न औषधी सेवन गरेर हैरान भएकी थापाले साथीको प्रेरणाबाट योग केन्द्रमा पुगी नियमित रुपमा योग साधना जोड्न थालिन् ।
आफूले गर्छु भनी अठोट गरेपछि गरेरै छाड्ने अति साहसिलो स्वभावकी थापाले आफ्नो रोगहरुलाई पनि योगको माध्यमबाट निको पारेरै छाडिन् । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उक्तिलाई थापाले पुष्टि गरिदिइन् । नाच्न गाउन भनेपछि हुरुक्क हुने बहु प्रतिभाकी धनी थापा वास्तवमा समाजसेवी पनि हुन् । विभिन्न माध्यमबाट नविन आनन्द योग केन्द्र नेपाललाई अतुलनीय योगदान दिएबापत् उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै २०७६ सालको विश्व योग दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री नरदेवी पुनज्यूको बाहुलीबाट सम्मानित हुनुभएकी थापा अहिले यस संस्थाको योग प्रशिक्षक समेत छिन् ।
एउटा उक्ति छ, दुःख परोस्, दुख्नु नपरोस् अर्थात् जिन्दगीमा हजारौं चुनौति आओस् तर रोग नआओस् । यसो भन्दैमा सबै निरोगी हुने स्थिति छैन । संसारका हरेक मनुष्यहरु हरेक किसिमका रोगहरुबाट पीडित छन् । ती पीडितहरुमध्येकी एक नारी हुन् कल्पना भण्डारी । लामो समयसम्म नसा दुख्ने, ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने आदि इत्यादि शारीरिक रोगहरुको साथसाथै मनोरोगले पनि बेलाबेलामा दिक्क बनाएको थियो । यी अनगिन्ती रोगहरुका कारणले कहाँ जाउँ, के गरौं भन्ने खालको मानसिक विचलन भइरहेको बेला अनेक रोगका लागि योग भन्ने पत्रपत्रिकामार्फत् जानकारी पाएपछि योग केन्द्रमा पुगेकी भण्डारीले आफ्नो योगसाधनालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग बनाई निरन्तर साधनामा तल्लीन रहिन् । जसको परिणाम स्वरुप आज भण्डारीको जीवनमा भौतिक तथा आध्यात्मिक रुपमा परिवर्तनहरु आएका छन् ।
जसले गर्दा योग साधनाप्रति प्रगाढ आस्था जगाएकी भण्डारीले यस नविन आनन्द योग केन्द्र नेपाललाई विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले अमूल्य योगदान दिँदै आएबापत् उनको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै २०७६ सालको विश्व योग दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री नरदेवी पुनज्यूको बाहुलीबाट सम्मानित भइसक्नुभएको छ । यसका साथै आजका दिनसम्म पनि संस्थाप्रति वफादार रही आफ्नो कर्तव्यमा उत्तिकै निष्ठावान् भण्डारी नविन आनन्द योग केन्द्र नेपालकी योग प्रशिक्षक समेत हुनुभएको छ ।
थोमस एल्वा एडिसनले भनेका छन् –One percent inspiration and ninety nine percent perspiration is the key to success. अर्थात् एक प्रतिशत प्रेरणा र ९९ प्रतिशत परिश्रम नै सफलताको रहस्य हो । आफ्ना दाजुको दिव्य प्रेरणाबाट प्रभावित भई योग केन्द्रमा प्रवेश गरेकी कमला गौतमले आफ्नो योग साधनाबाट धेरै कुरा पाएकी छिन् ।
संसारले रोग र शोकको सागरमा डुबुल्की मारिरहेको छ । संसारका अरबौं रोगीहरुमध्ये गौतम एक रोगी नारी थिइन् । तथापि जिन्दगीमा कहिल्यै पनि हार खाइनन् । जति जति चुनौतिहरु आउँछन् । त्यति त्यति जीवन यात्रामा अविचलित भई अगाडि बढिरहिन् । जसको परिणाम स्वरुप गौतमले आफूलाई एउटा कुशल व्यापारीको रुपमा उभ्याएकी छिन् । यसका साथै आफ्नो योग साधनाकै माध्यमबाट आफ्नो शरीरको विविध रोगहरुलाई पछाडि पार्दै नविन आनन्द योग केन्द्र नेपालकी योग प्रशिक्षकको रुपमा चिरपरिचित छिन् । प्रस्तुती: नविन जुग्जाली
Previous articleदूधको मूल्य सिजनअनुसार हुने
Next article५० पदकाे उपनिर्वाचनका लागि ४० करोड खर्च गर्दै आयाेग